AKADEMICKA | LIFE Prep School
Guusha waxbarashadu waa udub dhexaadka dugsiga 'Prep School'. Arday walba waxbarashadiisa waxaa hago Qorshe Barasho Shaqsiyeed. Qorshayaashaan waxaa loogu talagalay in lagu dhiso xoogagga iyo taageeridda aagagga waxbarasho ee ku wajahan baahida arday kasta. Qorsha kasta waxaa loo sameeyay ardaygaaga maanka ku jira waxaana ku jira casriyeynta horumarka sanadka oo idil.
Dhamaan ardayda Iskuulka DUGSIGA NOLOSHA waxay helayaan 1: 1 umeerin xagga akhriska iyo xisaabta, labadaba inta lagu jiro maalinta iskuulka iyo qoysasku waxay waydiin karaan barayaasha barnaamijka Iskuxirka Magaalada. Minnesota Math iyo Reading Corp waxay ka caawiyaan ardayda inay ku guuleystaan barashada maalinlaha ah ee kooxda yar. Dugsi Dugsi NOLOS sidoo kale wuxuu leeyahay adeegyo akhriska Cinwaanka 1 si loogu taageero ardayda.
Barashada akhriska waa safar gaaban oo aan la garanaynin. Waxay ku saabsan tahay caqabadaha horyaal ee lagu helo kalsoonida guul kasta. Journeys waa barnaamij dhameystiran oo ah K-6 luuqadda Ingiriisiga. Waxay bixisaa nidaam tilmaam ah oo akhriga suugaanta iyo qoraalka macluumaad labadaba, si loo helo xirfado aasaasi ah, iyo kobcinta awoodda hadalka, dhageysiga iyo qoraalka.
Saynisku waa ganacsi hal abuur leh oo taxliil leh, oo ay ku firfircoon tahay kartideena aadamiga ee fikirka. Adeegsiga manhajka FOSS ardayda waxaa la siiyaa waaya-aragnimo macno leh ayagoo kaqeyb galaya kaqeybgal firfircoon xagga dhaqamada sayniska.
Barashada xisaabta waxay ku bilaabataa ogaanshaha lambarada. Sidoo kale waa eegidda tirooyin ka badan si loo fahmo sida iyo sababta ay u shaqeeyaan, iyo barashada sida loo weydiiyo su'aalaha horseedaya fikir, hab xog ogaal ah oo loo xalliyo masalooyinka. adoo adeegsanaya sahaminta, falanqaynta, iyo muujinta fahamkooda ee fikradaha muhiimka ah.
Ardayda u qalma adeegyada Cinwaanka 1 waxay helayaan 30 daqiiqo oo maalintii ah barista koox yar oo ku takhasusay akhriska.
Ardayda dhigta barnaamijka loo yaqaan 'Life Prep' waxay leeyihiin waxbarasho jimicsi maalin kasta si ay kor ugu qaadaan hab nololeed caafimaad leh oo firfircoon. Ardaydu waxay sahamiyaan nashaadaadyo badan oo kala duwan oo ay ka mid yihiin kubbadda cagta, kubbadda cagta, qoob ka ciyaarka, hockey, iyo waxyaabo badan oo xiiso leh iyo xirfado xiiso iyo karti leh.
City Connects waa barnaamijka taageerada ardayda ee iskuulada 'Pre Prep School'. Barnaamijkan ayaa ardayda kuxiran ilaha bulshada si ay ula kulmaan baahiyahooda iskuulka ka baxsan. Laga soo bilaabo baahiyaha ardayda iyo baahiyaha qoyska, Lataliyaha Iskuxirka Magaalada wuxuu u shaqeeyaa sidii loogu hareeraysan bartayaasha adeegyada ay u baahan yihiin si ay si weyn u horumariyaan gaaritaanka ardayga.